Ikhaya eliLumkelekileyo loSapho elineGumbi lakhe wonke umntu!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTonesa
UTonesa ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo ka-Abbie yindawo entle ebanzi enamagumbi amane okulala enamagumbi okuhlambela amabini amakhulu ahlaziyiweyo. I-Wifi yasimahla kunye neDirectv. Sukuzinza ngegumbi lehotele, xa ungahlala kwikhaya elithandekayo, elinosapho elinendawo eninzi kunye nobumfihlo apho unokuziva usekhaya kanye ukusukela oko ufika. Vumela ikhaya lethu liphucule ukuhlala kwakho apha ePine Bluff kwaye likunikeze iinkumbulo ezimnandi zeholide yakho. Le ndawo ibekwe embindini kwindawo ezolileyo. Ukufikelela ngokulula kwiDowntown Pine Bluff.
Inqanaba lokungena linendawo yokulala yokumkanikazi, igumbi lokuhlala elikhulu, igumbi lokutyela, igumbi losapho elinesofa yokulala kunye nendawo yokutshisa iinkuni, ikhitshi lixhotyiswe ngayo yonke into ukwenza uhambo lwakho lube mnandi, ifriji yentsimbi engatyiwa kunye nomatshini wokuhlamba izitya, imicrowave, iipleyiti, izinto zesilivere, imbiza kunye neepani zokupheka, kunye nomenzi wekofu, umenzi wewaffle kunye nezixhobo ezininzi ezincinci kunye nezixhobo onazo ekhaya.
Kukho amagumbi okulala amabini amakhosikazi awongezelelweyo kwinqanaba eliphezulu kunye negumbi lokulala eligcweleyo kunye negumbi lesibini lokuhlambela eligcweleyo.
Kukho iwasha kunye nesomisi esinokusetyenziswa ukugcina izinto zicocekile.
Igumbi lelanga lingasemva kwendlu, sinemoto emi-2 encanyathiselwe igaraji, indawo enkulu engasemva elungele ukoyikwa kwaye ukonwabela iholide yakho. Ukupaka iRV okanye nasiphi na esinye isithuthi sokuzonwabisa esibiyelwe ngocingo. Abantwana baya kukuthanda ukudlala ibhola ekhatywayo, i-volleyball, intenetya okanye ibhasikidi, ibhola ekhatywayo, uyibiza ngasese kule ndawo.
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-4, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, 1 iisofa eziyi-
4.82 ·Izimvo eziyi-17
Ubumelwane buzolile kwaye le ndawo ibonelela ngeendawo ezininzi zokuzonwabisa ngaphakathi nangaphandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Tonesa
Ukuba ufuna ukunxibelelana nam inombolo yam ngu-501-613-2222